3 saacadood ama 8 saacadood – Safar tareen waa goob ku habboon nasashada nasashada. Haddii badanaa dhibaato kaa haysato inaad ku seexato waddooyinka, our 10 talooyin ku saabsan sida loo seexdo tareenka ayaa kaa dhigi doonta inaad u seexato sida ilmaha. Laga soo bilaabo safarka tareenka ee daruuriga ah ilaa talooyinka gudaha meesha ugu fiican ee riyooyinka macaan ee tareen kasta, waxaan guda galaynaa safar riyada macaan!
Markaad akhrinaysid maskaxdaadu waxay u safreysaa meel kale, goob, oo walwalka maalinta oo dhan ayaa baaba'a. Akhrin weyn waa jimicsi nasasho oo aad u fiican, adoo maskaxdaada ka saaraya faahfaahin kasta oo taxaddar leh. Hal saac ama laba, waad iska sii baxaysaa, waana ku filan tahay inaad hurdo ku seexato oo aad riyooto.
BestTipsSleeponTrain hurdo seexdo HurdadaTrainsEurope SleepOnATrain tareen safarka Talooyin safarka tareenka